Mpamatsy solika haingam-pandeha vita amin'ny plastika vita amin'ny alim-baravarankely - Mpamatsy solika haingam-pandrefesana vita amin'ny plastika vita amin'ny alimina avo lenta China, Factory –Jwell
antsoina hoe ACP amin'ny teny fohy, noforonin'ny foil aluminium sy polyethylene, mampiasa teknolojia famonoana thermo hamokarana ity fitaovana fananganana vaovao ity. Ampiasaina amin'ny rindrina fananganana izy io, ny haingon-trano ivelany ary koa ny fanaingoana ny dokambarotra sy ny varavarana anatiny.
Ny fampifangaroana ny teknolojia fanodinana nentim-paharazana sy ny traikefa azo ampiharina, Suzhou JWELL milina Co., ltd dia mamorona tabilao ACP haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha. ny fivoahan'ny maximun dia mety ho 2500kg / h, ny hafainganam-pandehan'ny 10m / min, ny sakan'ny 900-2000mm, ny hatevin'ny alimoola dia mihoatra ny 0.18mm.
Ary izahay dia manome tsipika ACP mahazatra miaraka amina famoahana 500-800kg / h, hafainganam-pandeha 5m / min, faran'ny vokatra mety 900-1560mm, hatevin'ny foil 0.06-0.5mm.